Mauritanie: Vanim-potoana vaovao ve? · Global Voices teny Malagasy
Mauritanie: Vanim-potoana vaovao ve?
Voadika ny 20 Aogositra 2009 19:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Taorian'ny fanonganam-panjakana herintaona lasa izay, sy ny nahavoafidy ny mpitarika io fanonganam-panjakana io Jeneraly Mohamed Ould Abdel Aziz ho filoham-pirenena, ary ny voalohany sady farany nipoahana baomba nahafaty tao amin'ny firenena ny fiandohan'ny volana aogositra, dia nisy fiovana be tany Mauritanie.
Ny 12 aogositra lasa teo dia nampitsahatra ny fandaharan'asany tany an-toerana ny Peace Corps, noho ny tsy filaminana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Mpilatsaka an-tsitrapo iray an'ny Peace Corps niasa tany Mauritanie no milaza ny heviny ao amin'ny Becky's Mauritanian Adventures:
Araka ny efa voamarikareo dia misy tsy filaminana be aty Mauritanie hatramin'ny niandohan'ny asako taty an-toerana tamin'ny taon-dasa. Araka ny efa nahiako dia nanapa-kevitra ry zareo tsy hamela anay hiverina any Mauritanie intsony. Androany no andro nampalahelo indrindra taminay rehetra, kanefa miezaka aho hahatsiaro fa manokatra tontolo vaovao ho anay ho amin'ny ho avy izao. Hiverina any Amerika indray aho angamba amin'ny herinandro ambony. Nahazo hevitra betsaka amin'izay hataoko aho, kanefa azoko antoka fa hampirotsaka lalindalina kokoa ny Peace Corps izany. Tsy hosoratako eto daholo ny pitsopitsony rehetra satria tsy fantatro daholo izy rehetra, kanefa ataoko izay haharenesanareo rehetra ny vaovao farany.
Mijery ny zava-misy dia manombana ny Newstime Africa :
Tampoka ho an'ny firenena ihany ny fanapaha-kevitra hanakatona ny Peace Corps satria tena manampy ny mponina ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo. Ny Peace Corps izay manana ny foibeny any Washington dia miasa amin'ny firenena 74 manerana ny tany. Hatramin'ny 1967 no nisiany ary taty amin'ny Ampiran'ny Silamo befasika no nanombohany ny prôgramany; niompana indrindra tamin'ny fambolena, ny fahasalamana sy ny fanabeazana no nifotorany ka nametraka ny fanabeazana mitovy lenta ho an'ny rehetra tao amin'ny firenena izy na dia teo aza ny fironan'ny mponina ho amin'ny fanabeazana silamo noho ny fanabeazana tandrefana. Miteraka fahabangana lehibe ho an'ny fanjakana ny fialan-dry zareo indrindra ho an'ny mponina any ambanivohitra izay efa nanomboka zatra ny fisiany noho izy ireo malala-tànana. Nampanantena ny hiady amin'ny ekstremista amin'ny fomba rehetra ny filoha Mohamed Ould Abdel Aziz hitandroana ny filaminana.
Nilaza ilay mpitoraka bilaogy:
Ny fiforonan'ny governemanta vaovao izay ahitana ministra 21 no mbola malaza any an-toerana, 4 andro taorian'ny nanendrena ireo mpikambana ao aminy. Olona manam-pahaizana daholo izy rehetra, manana mari-pahaizana ambony avy amin'ny anjerimanontolon'i Mauritanie na avy any ivelany.
Ny tena mitana ny laharana voalohany amin'izany resaka izany (ao amin'ny tontolon'ny bilaogy koa) dia i Naha Bint Hamdi Ould Mouknass, notendrena hitazona ny ministeran'ny raharaham-bahiny; araka ny fanondroan'ny bilaogy The Moor Next Door azy:
Ms. Bint Ould Mouknass no vehivavy voalohany nitazona io toerana io aty amin'ny firenena miteny arabo; narahan'ireo vehivavy 5 hafa izay notendren'ny jeneraly Mohamed Ould Abde Aziz ho ao amin'ny governemanta.
Manazava ny dikan'izany ilay mpitoraka bilaogy:
Sady am-pisainana no tena ilaina ny fanendrena azy: ny fanendrena an'i Bint Mouknass, tahaka ny olona nodimbiasany, dia fanehoana ny fifandraisana amin'ny any ivelany amin'ny endrika vaovao sady “malefaka”. Mampifaly ireo mpanara-dia azy koa ny jeneraly (indrindra tamin'ity farany). Mampisy kaly anelanelan'ny governamanta vaovao sy ny mahery fihetsika silamo izy, ny silamo izay manana politika iraisana amin'ny fandraisana anjara (maharitra) amin'ny fifidianana filoham-pirenena (e.g Israely), heverina fa araka ny politika dia hanome lanja ny tsy fanekena izany foto-kevitra izany, noho izany dia manala azy mazava tsara tsy ho ao anatiny, indrindra amin'ny ezaka ataony hiadiana amin'ny “fampihorohoroana”, na dia tsy nieritreritra izany aza talohan'ny tamin'ny herinandro lasa izay nisian'ny baomba nipoaka nahafaty (ary mety tsy neritreretiny).